हट्लान् कि रहलान् अर्थमन्त्री खतिवडा ?
२०७६ पौष २२ मंगलबार १०:४०:००
अर्थमन्त्रीबाट खतिवडा हट्दै छन् भन्ने हल्ला चलाएर सेयर बजारमा तीव्र चलखेल सुरु भएको छ, तर राष्ट्रिय सभा सदस्यमा खतिवडा पुनः नियुक्त हुने सम्भावना कायमै छ, सदस्य नरहे पनि आगामी २० भदौसम्म उनै अर्थमन्त्री हुन सक्नेछन्
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले राष्ट्रिय सभाका सदस्यमा डा. युवराज खतिवडालाई उम्मेदवार नबनाएपछि अर्थमन्त्रीमा उनको निरन्तरता हुने–नहुने विषयले बजार तरंगित भएको छ । खासगरी अर्थमन्त्रीबाट खतिवडा हट्दै छन् भन्ने हल्ला चलाएर सेयर बजारमा तीव्र चलखेल सुरु भएको छ । तर, राष्ट्रिय सभा सदस्यमा खतिवडा जुन प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका हुन्, सोही प्रक्रियाबाट पुनः आउन सक्ने सम्भावना कायमै छ ।
खतिवडा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएर राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका हुन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन जनामध्ये खतिवडाको कार्यकाल फागुनमा सकिँदै छ । रिक्त हुने सो सिटमा खतिवडालाई नै ल्याउने आश्वासन उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट उनले पाएको विश्वस्त स्रोतहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उनको निरन्तरता नभए पनि आगामी २० भदौसम्म उनले अर्थमन्त्रीका रूपमा काम गर्न पाउनेछन् । ‘खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘उनी सांसद रहे पनि, नरहे पनि आगामी आवको बजेट भने खतिवडाले नै प्रस्तुत गर्नेछन् ।’ खतिवडाले बनाएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नयाँ अर्थमन्त्री ल्याउने जोखिम प्रधानमन्त्रीले सायद मोल्नेछैनन् । त्यसो त हाल अर्थमन्त्री बन्ने दौडधुपमा लागेका नेताहरूले पनि बजेट बनाउन पाए मात्रै मन्त्री हुने आशय राखेका छन् ।
अर्थमन्त्रीमा आफूले पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने संकेत भने खतिवडाले गत जेठमै गरेका थिए । चालू आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा पत्रकारहरूले ‘प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीबाट तपाईंलाई हटाउने चर्चा चलेको छ नि’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनको जवाफ थियो, ‘अहिले तपार्इंहरू अर्थमन्त्री कहिले हट्ने भन्दै सोध्नुहुन्छ, पछि गएर अर्थमन्त्री कहिल्यै नहट्ने भनेर खबर लेखनुहुनेछ ।’
प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठासँग जोडिएको अर्थ मन्त्रालय
अर्थमन्त्री खतिवडाको कामसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिष्ठा पनि गाँसिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडा असफल हुनु भनेको प्रधानमन्त्री आफैं असफल हुनु हो । ‘पार्टीभित्रबाट खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउनुहुँदैन भन्ने चरम दबाबबीच ओलीले खतिवडालाई नै अर्थमन्त्री बनाए,’ स्रोत भन्छ, ‘यसबचीमा खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको विश्वास जित्दै नजिकको सहयोगीका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।’ सरकारले गरेका काम–कारबाहीका विषयमा तथ्यांकसहित बलियो रूपमा बचाउ गर्ने काम अर्थमन्त्री खतिवडाले गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँग समेत उनैले समन्वय गर्ने गरेका छन् । विकास साझेदारसँग राष्ट्रको हितका विषयमा कडा र स्पष्ट अडान लिन सक्ने अर्थमन्त्रीको छवि उनले बनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोत भन्छ, ‘विकास साझेदारहरूले समेत खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाब दिँदै आएका छन् ।’
प्रधानमन्त्री अस्वस्थ हुँदा सरकारका काम–कारबाहीको मुख्य जिम्मा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र अर्थमन्त्री खतिवडाले पाउने गरेको स्रोतले बतायो । कतिसम्म भने संसद्मा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई नै पठाउने गरेका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित विशेष सेवा ऐनमा आफ्नातर्फबाट उत्तर दिन प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभामा पठाएका थिए । विगत लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र अर्थमन्त्री नै हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा पनि जोगिएका खतिवडा
अघिल्लो महिना मन्त्रीहरू हेरफेर गर्दा खतिवडालाई हटाउन निजी क्षेत्रको मात्रै होइन, पार्टीभित्रैबाट ठूलो दबाब थियो । तर, गोकर्ण विष्टजस्ता राम्रो काम गरिरहेका मन्त्री ओलीले हटाए, तर खतिवडालाई निरन्तरता दिए । संघीय समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएका कारण दुईवटा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको अवस्थामा पुनः मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने चर्चा सुरु भएको छ । अझ रिक्त सभामुख पद पूर्वएमालाई दिँदा पूर्वमाओवादीलाई अर्थ मन्त्रालय दिनुपर्ने गरी पार्टीभित्र छलफल भइरहेको पनि
नेताहरू बताउँछन् ।
पहिलो बजेटको आलोचना भएपछि दोस्रोले लोकरिझ्याइँ
खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ल्याएको बजेटप्रति सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र मात्रै होइन, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासमेत बेखुसी देखिए । बजेट आएकै दिनदेखि अर्थमन्त्रीले सात्तारुढ दल, निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणबाट ओलोचना खेप्नुपर्‍यो । नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै पूरक बजेट ल्याउनेसम्मको अभिव्यक्ति दिए । खतिवडाले आफ्नो बजेटको डिफेन्स गरी नै रहे । उनले ल्याएको दोस्रो बजेटप्रति चाहिँ सर्वसाधारण र पार्टीपंक्ति सकारात्मक देखिए । खतिवडाले वृद्धभत्ता वृद्धि, सांसदको बजेट बढाउनेलगायत कार्यक्रमसहितको वितरणखुमी बजेट ल्याएपछि सर्वसाधारण तथा पार्टीका नेता–कार्यकर्ता खुसी भए ।
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल भन्छन्–अर्थमन्त्री फेरिने हल्ला मात्रै
अर्थमन्त्रीबाट डा. युवराज खतिवडा हट्ने विषय विशुद्ध हल्ला हो । पार्टीभित्र यस किसिमको छलफल केही पनि भएको छैन । पार्टीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा खतिवडालाई उम्मेदवार नबनाउँदैमा उहाँ अर्थमन्त्रीबाट हट्ने भन्ने कुरा आउँदैन । उहाँ राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएर आउनुभएको हो । फेरि पनि सोही बाटोबाट उहाँ सांसद बन्ने सम्भावना अझै कायम छ । अर्थमन्त्री र सभामुख पद बाँडेर लिने विषय झन् असान्दर्भिक नै हो ।
राज्यको क्षमताले तन्किन सक्नेजति तन्कfएर बजेटमा राहतका प्याकेजहरू छुट्याइएको छ : अर्थमन्त्री खतिवडा